Taariikh Nololeedka Boqorka Telegu Ahna Aabaha Jilaaga laga daba dhacay ee Ram Charan Chiranjeevi | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Bollywood » Taariikh Nololeedka Boqorka Telegu Ahna Aabaha Jilaaga laga daba dhacay ee Ram Charan Chiranjeevi
Taariikh Nololeedka Boqorka Telegu Ahna Aabaha Jilaaga laga daba dhacay ee Ram Charan Chiranjeevi
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 20-07-16 8:51 AM Chiranjeevi waxa uu dhashay 22 kii August 1955, Chiranjeevi waa Jilaa Film, soo saare, Qoob ka ciyaare, Heesaa, codeeye, Siyaasi, Ganacsade, sidoo kale waa shaqsi Maalgeliye Filimada, waxaana xusid mudan in sidoo kale Chiranjeevi inuu xubin ka yahay Kongareeska Hindiya.
Chiranjeevi waxa uu xubin sare ka noqday kana ahaa Wasiirka dalxiiska dowlada Hindiya Marka laga soo gudbo taariikh siyaasadeedka ninkan, waxa uu Chiranjeevi xaadiray lana soo shaqeeyey shirkada Filimada Madras sidoo kale waxa uu in badan wax ka jilay Filimada Telegu, Chiranjeevi waxa uu filimi aan aad u badneyn ku jilay Tamil, Kannada iyo Aflaan hindi ah.
Aabaha dhalay jilaaga caanka ah ee Ram Charan waxa uu jilay film kiisii ugu horeeyey sanadkii 1978 waxaana lagu magacaabaa Punadhirallu, Box Office kana waxa uu ka galay film kaas meelaha sar sare.
Chiranjeevi waxa uu caan ku noqday qoob ka ciyaarka lala dhacay isaga oo qeyb qurux badan ugaaga dhigay filimadiisa, waxa uuna qeyb ka noqday film lagu maamuusayey xaflad ka dhaceysa magaalada Moscow film kaasna waxa loogu magac daray Swayam Krushi.
Sanadkii 1988 kii waxa uu caawiye ka noqday Film guul heer sare ah gaaray, film kaas waxaa lagu maamuusayey sanad guuradii 35aad ee kasoo wareegtay xuriyada dalkaas, waxa uuna ku guuleystay Chiranjeevi afar biladood sanadkaas.
Sanadkii 2006 da Chiranjeevi waxaa lagu sharfay Padma Bhushan, waana bilad ay bixiso shirkada sedexaad ee ugu weyn dhanka shacabka dalka Hindiya, sidoo kale isla sanadkaas waxaas bilad sharafeed laga siiyey Jaamacada Andhra.
sanadkii 2013 ka waxa uu sidoo kale furay Mid kamid ah Bandhigyada lama ilaawaan ka ah kaas oo ay ku mideysnaayeen wasaarada dalxiiska dalka Hindiya iyo wasaarada socdaalka iyo baahinta dalkaas, sidoo kale Chiranjeevi waxa uu ka qeyb galay xafladii 14 guurada kasoo wareegtay shirkada Filimada Hindiya xafladaasna waxa lagu qabtay Macau.
Isla sanadkii 2013 ka IBN Live ayaa u magacowday Chiranjeevi “Ninka badalay wejiga Shaneemooyinka dalka Hindiya”, waxa uuna film kiisii 150aad uu soo baxay bishii May ee sanadkan 2015 ka Puri Jagannadh ayuuna qeyb yar oo muuqaal ah kulahaa.
Film kii uu soo saaraha ka ahaa K. Raghavendre Roa, jilaana uu ka ahaa Chiranjeevi waxa uu noqday film kii ugu horeeyey ee Telegu kaas oo soo xareeyey in ka badan 10 Crore, waxa uuna sidoo kale film kaas noqday midkii ugu sareeyey isla sanadkaas guud ahaan dalka Hindiya.
Shirkada Madadaalada Hindiya, Filmfare iyo India Today ayaa u magacaabay Chiranjeevi “Nin ka sareeya Bachchan” iyaga oo hoos u dhigay magaca Amitabh Bhachchan, sidoo kale jaraa’idyada kasoo baxa dalkaas ayaa isla sanadkaas cinwaan ugu dhigay “Mishiinka cusub ee sameeya Lacagta”.
1.25 Crore ayuuna soo xareeyey film kii Aapad Bandhacudu ee uu jilayey Chiranjeevi sanadkii 2002 da, Chiranjeevi waxa uu sanadkaas helay bilad. CNN iyo IBN ayaa sanadkii 2006 da u magacaabay Chiranjeevi ninka reer Telegu ee ugu shacabka badan.
Sidoo kale waxaa xusid mudan oo aan la ilaawi karin in Chiranjeevi uu sameeyey ama uu aasaase ka noqday shirkada qeyraadka ee Chiranjeevi sanadkii 1998 kii, taas oo wax ugu qabaneysa dadka si bini’aadanimo ah.
Sanadkii 2008 da waxa uu ku biiray siyaasada dalka Hindiya isaga oo aasaasay urur la magac baxay Praja Rajyam, waxa ay ka dhacday xaflada caleemo saarka ururkaas siyaasada Magaalada Hydrebad, Chiranjeevi waxa uu ku guuleystay codka gobolka Andhra Pradesh, sidoo kale xidigan waxa uu helay dhamaan codadkii meesha uu ku dhashay Tirupati.
Waxa uu weji gabax kala soo kulmay Palakollu waxaana loo doortay xubin inuu ka noqda siyaasada kuufurta dalka Hindiya guud ahaan, waxa uuna ururkiisa ku hogaamiyey iney noqdaan ururkii sedexaad ee hela codadka ugu badan dalka.
Daba yaaqadii bishii Febraury sanadkii 2011 ka waxa uu noqday ururka Chiranjeevi ee Praja Rajyam mid xubin sare ka noqda Kongareeska caalamiga ah ee Hindiya.
Noloshiisa Hore iyo Qoyskiisa
Chiranjeevi waxa uu ku dhashay Magaalo yar oo lagu magacaabo Mogalthur waxa ayna u dhawdahay Narsapur, aabihiisa waxa uu ahaa Askari isaga oo loo badalay meelo badan oo dalka kamid ah.
Chiranjeevi waxa uu waayihiisa yaraanta lasoo qaatay awoowihiisa, waxa uuna soo dhigtay iskuulo badan Nidadavolu, Gurajala, Bapatla, Ponnuru, Mangalagiri iyo Mogalturu. waxa uuna ka qeyb galay xaflada lagu maamuusayey sanad guuro kasoo wareegtay xuriyada dalkaas waxaana lagu qabtay Magaalada New Delhi, waxa uuna waayihiisa yaraanta uu jeclaa Chiranjeevi inuu noqdo jilaa.
Kadib markii uu kasoo qalin jebiyey Sri Y N College uuna kasoo qaatay shahaadada Ganacsiga waxa uu u wareegay Chennai waxa uuna ku biiray machad film jilista Madras sanadkii 1976 si uu horey usocod ugu sameeyo xirfadiisa jilaanimo, hooyadiisa ayaana ugu waqlashay magaca Chiranjeevi, oo micno ahaan loola jeeda “Noolow weligaa”.
Chiranjeevi waxa uu aabe u yahay labo gabdhood waxaana lagu kala magacaabaa Sushmita iyo Sreeja, sidoo kalena waxa uu aabo u yahay jilaaga caanka ah ee aad garaneysaa Ram Charan, Waxaa la dhashay soo saaraha Film ada Nagendra Babu, sidoo kale waxaa la dhashay jilaaga laga daba dhacay ee kasoo jeeda kuufurta dalka Hindiya Pawan Kalyan.
Chiranjeevi waxa uu noloshiisa Filimada ku bilaabay film ka Punadhirallu Waxaana soo saare ka ahaa film kaas Pranam Khareddu, waxa uuna kusoo jiitay film kaas Chiranjeevi shacab badan.
Waxa uu sidoo kale door aan ad u weyneyn ka qaatay film ka Tayaramma Bangarayya, sidoo kale waxa uu door aktar caawiye ah kaga qeyb qaatay film ka Love You iyo K.Blachander’s, waxaa Film kaas atoore ka ahaa Kamal Haasan. waxaana u raacay film ka Tamil ka ah Avargal, sidoo kale Chiranjeevi, 14 film kale oo xiriir ah ayuuna sameeyey wixii ka dambeeyey film kaas.
Dhamaan Filimadii uu jilay Chiranjeevi Oo Dhameystiran iyo sanadihii uu soo baxay halkan hoose ka aqriso 1979: Punadhirallu 1980: Punnami Naagu as Nagulu 1982: Subhalekha as Narasimha Murthi 1983: Abhilasha as Chiranjeevi 1983: Khaidi as Sooryam 1984: Challenge as Gandhi 1985: Vijetha as Chinnababu 1986: “Chantabbai” as Paandu 1987: Pasivadi Pranam as Madhu 1987: Swayamkrushi as Sambayya 1988: Rudraveena as Suryanarayana Sastry 1988: Yamudiki Mogudu as Kali/Balu 1989: Athaku Yamudu Ammayiki Mogudu as Kalyan 1990: Kondaveeti Donga as Raja 1990: Jagadeka Veerudu Atiloka Sundari as Raju 1991: Gang Leader as Rajaram 1992: Gharana Mogudu as Raju 1992: Aapadbandhavudu as Madhava 1993: Mutha Mestri as Bose 1997: Hitler as Madhava Rao 1998: Choodalani Vundi as Rama Krishna 1999: Sneham Kosam as Simhadri/Chinnayya 2002: Indra as Indrasena Reddy/Shankar Narayana 2003: Tagore as Tagore 2004: Shankar Dada M.B.B.S. as Shankar Prasad/Shankar Dada 2010: Magadheera in Cameo 2015: Bruce lee-The Fighter in Cameo